Activities & Events – YRYEA – Yangon Region Young Entrepreneurs Association
Digital Journey (2 Dec 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏EDMC Committeeမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော “Digital Transformation Guide by YRYEA” Training Program မှ …
Going Digital (22 Nov 2020)
Going Digital Panel Discussion ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယပတ်၌ ကျင်းပလေ့ရှိသော စွန့်ဦးတီထွင်ရက်သတ္တပတ် Global Entrepreneurship Week (GEW) ကို ၂၀၁၈ …
မင်္ဂလာပါ အသင်းသားများ ခင်ဗျ ထူးခြားအကျိုးရှိစေမယ့် Program လေးတစ်ခုကို YRYEA မှ စီစဥ်တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ “Digital Transformation Guide by YRYEA” 🔵 …
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော အသင်းသူ/အသင်းသားများ ခင်ဗျား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း၌ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိနေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် (COVID-19) ရောဂါ ကူးစက်ခံစားနေရသော လူနာများ အတွက် မိမိတို့၏ ကိုယ်ကျိုးကို …
Impact of the New Trademark law in 2020 (10 Sep 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA) ၏ AFRC Committee မှ စီစဉ်တင်ဆက်သော ” Impact of the New Trademark …
Entrepreneurs Innovation in Action (30 Aug 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA) နှင့် Myanmar Institute of Business တို့မှ ပူးပေါင်း ကျင်းပသည့် “Entrepreneurs Innovation in …
Effective Management Of Corporate Disputes (28 Aug 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ CAC ကော်မတီ မှ အသင်းသူအသင်းသား များအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် အဓိကကျသော ဥပဒေရေး၊ ငွေပေးချေရေးနှင့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ …
ERP Journey For SMEs (23 Aug 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ၏ AFRC နှင့် EDMC ကော်မတီ ၂ခုမှ ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်သည့် “ERP Journey For SMEs” အစီအစဉ်အား …
NEW LEADERSHIP IN A NO-NORMAL WORLD Virtual Session (4 Aug to6Aug 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA) မှ Network Alliance အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ထားသည့် NEW LEADERSHIP IN A NO-NORMAL WORLD …
Introduction to OKR (18 July 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(YRYEA) မှ Members Only Event အဖြစ် အသင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်၍ YRYEA ၏ CAC ကော်မတီ, InformationMatrix နှင့် Yever …
Raising Capital and Seeking Financing (10 July 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ CAC ကော်မတီ မှ YRYEA အသင်းသူအသင်းသား များအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် အဓိကကျသော ဥပဒေရေး၊ ငွေပေးချေရေးနှင့် အငြင်းပွားမှု …
Cyber-security in the Age of Digital Transformation (4 July 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(YRYEA)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MYEA) တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်သည့် “Cybersecurity in the Age of Digital Transformation” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Panel Discussion အား …
Effective Time Management In Crisis (4 July 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ EDMC Committee မှ YRYEA Members Only Event အဖြစ် အသင်းသားများအတွက် အပတ်စဉ် တင်ဆက်လျက်ရှိသည့် …
Managing Money During Crisis (27 Jun 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ EDMC Committee မှ မှ YRYEA Members Only Event အဖြစ် အသင်းသားများအတွက် အပတ်စဉ် …
E-Business and Digital Branding For Business Transformation (20 Jun 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ EDMC Committee မှ စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် Virtual Bootcamp Series မှ Panel Discussion2…
Brand Management (Virtual Bootcamp (13 Jun 2020)
Basic Concepts of Company Law in Myanmar (12 June 2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ CACကော်မတီ မှ YRYEA Members Only Event အဖြစ် YRYEA အသင်းသူအသင်းသားများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် …
Building Digital Workplace (6 June 2020)
Building Digital Workplace (Virtual Bootcamp_6 June 2020) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ EDMC Committee မှ စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် …
Cognitive Behavior Therapy for Employee Engagement (23 May 2020)
Cognitive Behavior Therapy for Employee Engagement (23 May 2020) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ EDMC Committee …
Marketing tips for the new paradigm (16 May 2020)
Marketing tips for the new paradigm – 16 May 2020 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA)၏ EDMC …
Business Challenges during Covid 19 Period
Covid-19 ကာလ နှင့် စီးပွားရေး စိန်ခေါ်မှုများ(12-Apr-2020) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA) မှ စီစဉ်သည့် “COVID-19 ကာလနှင့် စီးပွားရေး စိန်ခေါ်မှုများ” …
Thickness to Fitness
မိတ်ဆွေ….သင် အိမ်မှာနေရတာ ငြီးငွေ့နေပြီလားYRYEA အသင်းသူ/သားများအတွက် Work Life Balance မျှတမှူရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ အိမ်မှာနေရင်း ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်နိုင်မယ့် ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှူများကို လျော့ချပေးမယ့် YOGA for Stress …
Business Transformation (30 May 2020)
#YRYEA #Virtual Bootcamp မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (YRYEA) ၏ EDMC ကော်မတီမှ စီစဥ်တင်ဆက်လျက်ရှိသော Virtual Bootcamp Series …
Challenging legal Issues (23 May 2020)
မင်္ဂလာပါ အသင်းသူ/အသင်းသားများ ခင်ဗျာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှတင်ဆက်သည့် “COVID-19 ကာလနှင့် ဥပဒေရေးရာ စိန်ခေါ်မှုများ” ခေါင်းစဥ်ဖြင့် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေအနေများ၊ ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်များကို Online …
YRYEA Virtual Bootcamp 2020
#YRYEA Virtual Bootcamp လက်ရှိ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော COVID-19 ကာလတွင် YRYEA အသင်းသူအသင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ …
#YRYEA #COVID19 #KBZ (၁/၀၆/၂၀၂၀) ယနေ့ (၁/၀၆/၂၀၂၀) မနက် ၁၀ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်တွင် KBZ နာယကကြီးဦးအောင်ကိုဝင်းမှ ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသမှရောင်းချရန်ခက်ခဲသောဂေါ်ဖီထုပ် ၅ သိန်းဝယ်ယူရေးအစီစဥ်အရ …
View from the Top(26 Jan 2020)
View from the Top ရန်ကုန်တိုင်းစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်း (YRYEA) ၏ EDMC ကော်မတီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော “Getting Ready For The Digital …
Fun Dash Run Event 2019 (15 Dec 2019)
Fun Dash Run Event 2019 ဆောင်းရဲ့မနက်ခင်းမှာ အသင်းသူ အသင်းသားတွေသာမက ပြင်ပမှ စိတ်ဝင်စားသူတွေပါ ဝင်ရောက် ကစားနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံးသော …
Singpore Regional Infrastructure Summit (16 Aug 2019)
မင်္ဂလာပါ အသင်းသူအသင်းသားများရှင့် Singapore နိုင်ငံတွင် ကျင်းပလျှက်ရှိသော SINGAPORE REGIONAL INFRASTRUCTURE SUMMIT (SRIS) သို့ တက်ရောက်လျှက်ရှိသော YRYEA အသင်း၏ Vice …
Youth Day Camp Program (27 Jul 2019)
Objective: To provide opportunities to learn essential basic business skills and encourage to generate their …
Attending to China-ASEAN Economic and Trade Cooperation(27 May 19)
လေးစားအပ်ပါသောYRYEAအသင်းသားများရှင့် CYEA (China Young Entrepreneurs Association)မှ တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ Ningxia Hui Autonomous ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ (၂၇)ရက်နေမှမေလ (၃၁)ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်မည့် …
Yangon Investment Forum (10 May 2019)
2019 Yangon Investment Forum ပွဲကြီးတွင် YRYEA အသင်းအနေဖြင့် လည်း တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ …
Inspirational Talk Show (6 May 2019)
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မွေးရပ်မြေမှ ခွဲခွာပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဘဝကိုဘယ်လိုကြိုးစားပြီးရုန်းကန်ပြီး အောင်မြင်မှူရှိခဲ့သလည်းဆိုတာကို အတွေ ့အကြုံများမျှဝေပေးမယ့်သူကတော့…. Inspirational Talk Show with Ko Philip Maung …
YRYEA Retreat 2019 (5 Apr 2019)
YRYEA Retreat 2019 (5/04/2019) to (7/04/2019) Nga Laik Khan Thar Eco Resort …
Meeting with Mr Paul Wild and YOMA Bank (3 Apr 2019)
ယနေ့Apri 3, 2019 နံနက် ၁၁းဝ၀ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ဦးသန်းထိုက်လွင်(ဥက္ကဌ) ဦးဆောင်သောစီမံခန့်ခွဲမှူကော်မတီဝင်များသည် Mr Paul Wild(Senior Manager) နှင့် မဆုသက်ထူး(Head …
Women of the future Awards (21 Mar 2019)
Congratulation! Dr Theingi Win. YRYEA ရဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ သိဂီ င်္ဝင်း (CEO, Global Assistant ) သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံ …
Entrepreneurship Week (7Oct 2018)
MYEA Award ဆု စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် အထူးသတင်းကောင်း နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် Myanmar Entrepreneurship Summit 2019 တွင် …